Touchless မော်တော်ကားရေချိုးခေါင်းလျှော်ရည်ဖော်မြူလာ | ဂရိတ်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / ကားတစ်စီးရေချိုးခေါင်းလျှော်ရည်ဖော်မြူလာ
သို့သော်သင်သည်အခြားယေဘုယျသန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူအရည်ဆပ်ပြာမိမိတို့၏မော်တော်ယာဉ်များအပေါ်စီရင်နိုငျသောအန္တရာယ်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့မော်တော်ယာဉ်မှအန္တရာယ်ရှိသောသော caustic ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေး, နှင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစေလိမ့်မည်။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဘယ်လို righ ကားတစ်စီးရေဆေးခေါင်းလျှော်ရည်သို့မဟုတ်ကားရေဆေးဆပ်ပြာရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးသောအရာများကိုဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အတူ Eco ကားကိုရေဆေးခေါင်းလျှော်ရည် ingredigents သည်။
♣စူပါပါ ၀ င်ပြီးထိတွေ့မှုကင်းသောကားရေဆေးအမှုန့်။
♣ Eco-friendly ပါဝင်ပစ္စည်းများကားရေဆေးခေါင်းလျှော်ရည်၏ဖော်မြူလာ။
♣ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ကားကိုရေဆေးကုန်ကျစရိတ်။
Ops အမြင့်အမြှုပ်မော်တော်ကားရေချိုးခေါင်းလျှော်ရည် vechicle တစ်ဦးတည်းသာခြေလှမ်းရှင်းလင်းဖို့တီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဆင့်မြင့် features
ညင်ညင်သာသာဖယောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးချွတ်ပြီးမပါဘဲခက်ခဲတဲ့ဖုန်, လမ်းအညစျအကွေးနဲ့ညစ်ညမ်းမှုကွာ foams ကြောင်းပုံသေနည်း။
အစားဆေးသုတ်သို့ကြိတ်၏။ ပူပြင်းသို့မဟုတ်ရေအေးအတွက်ချက်ချင်းအရည်ပျော်သွားပါသည်။ ဒါဟာ Eco-friendly ကားတစ်စီးလက်ဆေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
5.5kgs ကားရေဆေးအမှုန့် + 14.5kgs ရေ = 20kgs ကားတစ်စီးအဝတ်လျှော်အရည်! (နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ၁: ၃ - ၁: ၃.၅ တွင်ဖျော်ရည်အချိုးအစား） ယခု）
kg ၁ ကီလိုဂရမ်အမှုန့်သည် ၃.၀ မှ ၃.၅ လီတာရေကိုဖျက်သိမ်းသည်။
♦မတယောအချိုးအစား (1 80) အတွက် masterbatch နှင့်ရေရောစပ်။
♦ဒါကြောင့် 16 နာရီအပြီးထိပ်တန်းစုစည်းသုတ်-အခမဲ့ကားတစ်စီးအဝတ်လျှော်ခေါင်းလျှော်ရည်သို့လှည့်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ 20kgs စင်ကြယ်သောကားကိုရေဆေးအရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အံ့သြစရာသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု, 1000 ယာဉ်များရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်ပဲ!
၎င်းသည် OPS Concentrated masterbatch ပစ္စည်းများမှဆပ်ပြာ Car Car Shampoo ဖြစ်သည်။
သငျသညျကားကိုလျှော်ခေါင်းလျှော်ရည်သို့မဟုတ်ဆပ်ပြာ DIY ချင်တယ်ဆိုရင်။ ငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကောင်းပါ
ကားတစ်စီးသန့်ရှင်းရေးထောက်ပံ့ကုန်၏ Specifications စာရွက်
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. အိမ်.